LASEMA Ebidola Ịkụkpọ Ụlọ Na-Achọ Ịdà Àdà Na Surulere - Igbo News | News in Igbo Language
Nov 3, 2021 - 15:33
Ụlọọrụ 'Lagos State Emergency Management Agency (LASEMA)' nọrọ na nsonso a wee malite ịkụkpọ ụlọ ebe obibi nwere nsogbo ma na-achọkwa ịdà àdà na mpaghara Aguda dị na Surulere nke steeti Lagos.
Dịka ozi a kụpụrụ site n'aka ụlọọrụ ahụ siri kọwaa, ha zigara 'Cobra Squad' ha dị n'Onipanu, gaa na 'No. 4 Kola John Street off Fehintola Giwa Street, Aguda Surulere' ebe e nwere ụlọ otu akụkụ ya dara ada n'abalị ụbọchị ụka, nke mezịrị ka ọ bụrụ ihe izendụ na ihe égwù nyegara ndị bi ebe ahụ.
Kaosiladị, ozi ahụ mere ka a mara na o nweghị onye ọbụla nwụrụ n'ihe mberede ahụ oge ahụ otu akụkụ ụlọ ahụ dara oge. Ndị ụlọọrụ ahụ, site na njikọaka LASBCA, LNSC na ụlọọrụ 'Lagos State Task Force' gbaara wee gaa n'ebe ahụ ya bụ ihe mere, iji mara ka ọnọdụ siri gbata kwụrụ n'ebe ahụ.
Ya bụ ozi gakwazịrị n'ihu kọwaa na ụlọọrụ LASEMA agwala ndị bi n'ụlọ ahụ ka ha kwakọrọ ngwongwo ha pụọ n'ebe ahụ, iji zeere ọnwụ mberede maọbụ ihe ọdachi ọbụla ịdapụta.
Ọ bụzị oge ụlọọrụ a mechaara ihe ndị ka ha bagidezịrị n'ịkụkpọ ụlọ ahụ, ka o wee ghara ịdà, tigide mmadụ.